बास्तविक प्रेम कहानी बोबी कस्तो चल्यो ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
बास्तविक प्रेम कहानी बोबी कस्तो चल्यो ?
१० श्रावण २०७५, बिहीबार ००:२९
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र बजारमा बायोपिक चलचित्र चल्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण चलचित्र बोबीले पेश गरेको छ । चलचित्र प्रदर्शनमा आएको दोस्रो साता पुग्नै लाग्दा मल्टिप्लेक्स हलमा बोबी हेर्ने दर्शकको फ्लो बढ्दो छ ।
प्रदर्शनको पहिलो र दोस्रो दिन औसत व्यापार गरेको बोबीले त्यसपछि निरन्तर राम्रो व्यापार गरिरहेको निर्माण पक्ष दाबी गरेको छ । सिंगल थिएटरमा भन्दा चलचित्र बोबीलाई मल्टिप्लेक्स हलमा रुचाइएको हो । यदी चलचित्र राम्रो बनेको छ, कथावस्तु राम्रो छ भने चलचित्रका लागि स्टार कलाकारको आवश्यकता नपर्ने पनि गतिलो उदाहरण पेश गरको छ बोबीले ।
चलचित्रका अभिनेता तथा अभिनेत्री उमेश थापा र कविता गुरुङ वास्तविक रुपपै रियल जोडी हुन् । उनीहरुको प्रेममा आएको उतार चढाव तथा जीवन संघर्षको पाटालाई चलचित्रमा जस्ताको त्यस्तै उतारिएको छ । कतिपय चलचित्र वास्तविक कथामा आधारित भए भने अभिनय गर्ने कलाकार भने फरक हुन्छन् । भने कुनै चलचित्रमा रियल जोडीको अभिनय रह्यो भने पनि कथा अर्कैको र वनावटी हुन्छ । तर, बोबीको हकमा भने यो लागू हुँदैन । रियल जोडीले नै चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । उनीहरुको अभिनय स्टार कलाकारको भन्दा कम नभएको दर्शकहरु बताउँछन् ।
‘बोबी’ले सार्वजनिक विदा नभएको दिन पनि सुखद कलेक्सन गरिरहेको छ । हुनत, व्यापारका लागि फिल्म सिंगलभन्दा मल्टिप्लेक्समा टिकिरहनु राम्रो हो । मुलुककै ठूलो मल्टिप्लेक्स चेन क्यूएफएक्सले यो फिल्मलाई बुधवार ५ शोज दिएको हो । मंगलबार तीन शोज बाढेको थियो । फिल्मले पाएको कुनै पनि शोज दर्शक अभावले रद्द भएका छैनन् । प्रायः सबै शोज हाउसफुल छन् । चलचत्रिलाई बुधवार राजधानीमा रहेका मल्टिप्लेक्स हल एफक्यूबले १ शो, बिग मुभिजले १ शो र विएसआर मुभिजले २ शोज बाढेका थिए ।
असार २९ गते योसँगै एकसाथ प्रदर्शनमा आएका तीन फिल्म ‘बाबु कान्छा’, ‘यो पागल मन’ र ‘वीराङ्गना’ मल्टिप्लेक्ससँगै सिंगल थिएटरबाट समेत उत्रिसक्दा ‘बोबी’ ले भने दर्शक बढाउँदै गएको छ ।
फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सले दर्शकको उत्साहजनक साथले उर्जा मिलेको बताए । उनी फिल्मले नेपालबाटै लगानी सुरक्षित गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । राजधानीसँगै चितवन, पोखरा, धरान, इटहरी र दमकमा पनि ‘बोबी’लाई दर्शकको राम्रो साथ मिलिरहेको जनाइएको छ ।
चलचित्रमा उमेश र कविताका अलावा विजय लामा, रुबी राणा शाह, देशभक्त खनाल लागयतका कलाकारहरुको पनि यसमा अभिनय छ । चाम्स इन्टरटेनमेन्ट र लण्डन आई इन्टरटेनमेन्टको व्यानरमा निर्माण भएको ‘बोबी’ मा संचारकर्मी नरेश भट्टराई र गिरिराज घिमिरेको स्क्रिप्ट, नवराज कृष्ण थापाको छायांकन, अर्जुन जिसीको सम्पादन र बसन्त सापकोटा र ताराप्रकाश लिम्बुको संगीत रहेको छ ।
नेपाल युगान्डासँग १ विकेटले पराजित
आईपीएल : मुम्बई र हैदरावाद भिड्दै